त्यसैले जब हामी येशूको बारेमा कुरा गर्न सुरु र हामी परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्न थाल्दा कहिलेकाहीं एउटै विभाग मा विचार. तिनीहरूले परमेश्वर र शैतानको बीचमा एक कस्मिक युद्धमा रूपमा ब्रह्माण्डको लाग्छ. र हाम्रो मनपर्ने कथाहरू सबै जस्तै, हामी जो जीत हेर्न अन्त आशंका गर्दै हुनुहुन्छ. येशूले राम्रो बस एक एजेन्ट जीत आशा छ कि हामी छ? येशूले अर्को चरित्र कथा छ?
मार्क सुसमाचारको राम्ररी हामी येशूको अनुहार दुष्ट अनुहार को शक्तिहरू अन्तरक्रिया हेर्न अवसर धेरै प्राप्त. त्यसैले हामी एक कहानी हेर्न र यो प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. र म त्यहाँ येशू र दुष्ट को शक्तिहरू बीच मा जा युद्धमा छ कि contend थियो, तर यो एक निष्पक्ष लडाई छैन. गरेको मार्क सम्म खोल्न गरौं 5.
मार्क सुसमाचारको मा यस समय वरिपरि, येशूले शिक्षा गरिएको थियो र ठूलो भीड भेला र उहाँको शिक्षा सुन्न थाले. साँझ आउँदा तिनीहरूले एक जहाजमा पायो र टाढा रवाना. जहाँ windstorm आउँछ यो कथा छ, चेलाहरूले आतंक, र येशूले आफ्ना शब्दहरू हावा calms, "शान्ति, अझै पनि हुन। "तिनीहरूले समुद्र मा चरम विरोध भेटे थिए र येशूको यो हेरविचार त्यसैले. तिनीहरूले अब विरोधको पूरा बित्तिकै तिनीहरू सुरु रूपमा आराम गर्न.
का पाठ पढ्न अनुमति, पद मा सुरु 1.
तिनीहरू समुद्रको अन्य पक्ष आए, को Gerasenes को देश. अनि येशू डुङ्गा बाहिर राखिएको थियो जब, तुरुन्तै त्यहाँ अशुद्ध आत्मा संग tombs मानिसको उहाँलाई भेट. उहाँले tombs बीचमा बस्ने. र कुनै एक उहाँलाई अब बाँध्न सक्छ, एक श्रृंखला संग पनि, लागि उहाँले अक्सर बंधन र चेन संग बाध्य भएको थियो, तर उहाँले अलग गर्ने चेन wrenched, र उहाँले टुक्रा मा बंधन भङ्ग. कोही पनि हैन… बल थियो… उहाँलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ गर्न. रात र दिन tombs बीचमा र हिमालहरू मा उहाँले सधैं बाहिर रो र ढुङ्गा आफूलाई काटन थियो. अनि उहाँले टाढैबाट येशूलाई देखे…, उहाँले भाग्यो र उसलाई अघि लड्यो. र ठूलो सोरले बाहिर रो, उसले भन्यो, "तिमी मेरो साथ के गर्न छ, येशूले, सर्वोच्च परमेश्वर को छोरा? म परमेश्वरले तपाईं adjure, उहाँले तिनलाई यसो भन्दै थिए मलाई पीडा छैन। ", "मानिस को बाहिर आऊ, तपाईं अशुद्ध आत्मा!"अनि येशूले तिनलाई सोध्नुभयो, "तिम्रो नाम के हो?"उहाँले जवाफ दिनुभयो, "मेरो नाम रोमी पल्टनमा छ, हामी धेरै छन्। "अनि उहाँले तिनीहरूलाई देश बाहिर पठाउन छैन उहाँलाई बिन्ती. अब सुँगुरहरु को एक महान बथान को Hillside मा त्यहाँ खुवाउने थियो, र तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे, भन्दै, "को सुँगुरहरु हामीलाई पठाउनुहोस्; उहाँले तिनीहरूलाई अनुमति दिए त हामीलाई तिनीहरूलाई प्रविष्ट गरौं। ". र अशुद्ध आत्माहरू बाहिर आए, र सुँगुरहरु प्रवेश, र बथान, दुई हजार बारेमा नम्बर, समुद्र मा ठाडो बैंक तल हतारिएको र समुद्र मा डुबेर मर्छन् थिए. यो herdsmen भागे र शहरमा र देशमा यो भन्नुभयो. र मान्छे भनेर के भयो थियो थियो हेर्न आयो. र तिनीहरूले येशूले आए र भूत मानिस देखे, यस रोमी पल्टनमा थियो थिए जो एक, त्यहाँ बसिरहेका, ढाकिएको र आफ्नो दाहिने मनमा…, र तिनीहरूले डराएका थिए. र देखेका ती यसलाई तिनीहरूलाई वर्णन दुष्ट स्वर्गदूतबाट सताइएको मानिसलाई र सुँगुरहरु भयो कुरा. र तिनीहरूले क्षेत्रबाट प्रस्थान गर्न येशूले माग्छु गर्न थाले. उहाँले डुङ्गामा रही थियो, दुष्ट संग नजिकै भएको थियो मानिस उहाँलाई साथ हुन सक्छ भनी बिन्ती गरे. अनि उहाँले उसलाई अनुमति थिएन तर उहाँलाई भने, "आफ्नो मित्रहरुलाई घर गएर प्रभु तपाईं लागि गर्नुभएको छ कति तिनीहरूलाई बताउन, र उहाँले तपाईं कृपा थियो कसरी। "अनि उहाँले टाढा गए र Decapolis घोषणा गर्न धेरै येशूले लागि गरेका थिए कसरी सुरु भयो, र सबैलाई छक्क परे. (मार्क 5:1-20 ESV)
म. येशूले मानिसको नजिकै को प्रेत मुठभेड़ों (5:1-6)
त्यसैले बित्तिकै तिनीहरू अशुद्ध आत्माले तिनीहरूले यो मानिस द्वारा भेट गरिरहनु भएको डुङ्गा बाहिर कदम रूपमा. अशुद्ध आत्मा मूलतः भूत भन्दै को बस अर्को तरिका हो. तिनीहरूलाई भेट गर्ने यो मानिस राक्षस द्वारा नजिकै थियो. पाठ उसलाई दिन्छ विवरण Chilling छ.
उहाँले मरेका बीच बस्ने. उहाँले मरेका कम्पनी रुचि, जीवित को कम्पनी गर्न. उहाँले superhuman बल थियो, यति कुनै चेन उहाँलाई रोक्न सकून् भनेर. उनले तिनीहरूलाई भङ्ग. उहाँ सधैं चिल्ला र बाहिर रो थियो. उहाँले harming शारीरिक थियो, आफूलाई पिटाई, आफूलाई काटन. यो मानिस विचलित छ.
यसले हामीलाई हाम्रो दिनमा शैतानिक सास्ती यस प्रकारको कल्पना गर्न को लागि हार्ड प्रकारको छ. एक, किनभने हामी धेरै अलौकिक विश्वास छोडेका छन्. र दोश्रो, किनभने हामी सबै भन्दा व्यक्तिमा शैतानिक सास्ती देखेको छैन. तर म एक मिनेट को लागि मेरो साथ आफ्नो कल्पना प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
हामी यो मानिस देखे भने हामीले के थियो? तपाईं एक दिन घर ड्राइभिङ र कब्रिस्तान बस्ने भाइ हेर्न हुनुहुन्छ, दुखाइ र सास्ती मा चिल्ला. मलाई थाहा. म तिनलाई खोसी गर्न अख्तियार केही प्रकारको कल चाहन्छु. हामीले उहाँलाई संस्थागत हुनेछ. उहाँले आफूलाई र अरूलाई खतरा छ र उसले आफ्नो दायाँ मनमा छैन. उहाँले सहायता आवश्यक. साथै Gerasenes को देश मा मान्छे उसलाई के थाहा थिएन. तिनीहरूले गर्ने प्रयास तिनलाई दल, तर यो काम गरेन. म आफ्नो मन को हाम्रो डराएका थिए निश्चित छु.
त्यहाँ मानिसहरूले हाम्रो दिनमा यस जस्तै हो, जो शाब्दिक उहाँलाई जस्तै सास्ती दिइन्छ. आफ्नो टाउको मा आवाज संग, र हिंसात्मक प्रवृत्ति, जसले आफूलाई कटौती. हामी मात्र पागलपन वा निराशा रूपमा वर्गीकरण, तर म यो अवस्थामा धेरै मा पक्का छु, सबै होइन, तर यी अवस्थामा धेरै यसलाई शैतानिक दमन छ. र कथा मा सहर मानिसहरूलाई समान, हामीले तिनीहरूलाई के थाहा छैन अन्य तिनीहरूलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ र तिनीहरूलाई आफू र अरूलाई चोट देखि राख्न प्रयास भन्दा. हामी अहिले त्यसो गर्न थप उन्नत तरिका छ. हामी padded पर्खाल र दबाइहरु संग कोठा संग संस्थाहरू र psych वार्ड छ.
आफ्नो craziness लागि कारण मन आफ्नो राज्य बदल भनेर केही आघात भन्दा बढी छ. दुष्ट आध्यात्मिक सेना आफ्नो शरीर माथि लिएका छन् र तिनलाई torturing छन्! उहाँले यो जस्तै जीवित रुचि छैन. उहाँले शोषित छ. उहाँले कब्जा छ, कैदी आयोजित भइरहेको, आफ्नो इच्छा विरुद्ध यातना.
दुष्ट परमेश्वर र उहाँको उद्देश्यबारे विरोध
धोका भाइबहिनीहरू नगर्नुहोस्. दुष्ट वास्तविक हो. तिनीहरू आध्यात्मिक जगतले हुनुहुन्छ. तिनीहरू दुष्ट हुनुहुन्छ र तिनीहरूले परमेश्वरको उद्देश्य विरुद्ध काम. मार्क सुसमाचारमा, येशूले दुष्ट संग रन-इन्स को धेरै छ. उहाँले अध्यायमा एक धेरै समान घटना छ 1. र सुसमाचारका दुष्ट मा अधिकांश समय मान्छे oppressing र सृष्टिको नाश गर्न प्रयत्न. यस विशेष मानिस संग, तिनीहरूले उहाँलाई dehumanizing छन्. तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरको छवि नष्ट गर्न खोजिरहेका छन्. दुष्ट पूर्ववत र संसारमा परमेश्वरको उद्देश्यका बाधा गर्ने कोसिस. अनि परमेश्वरले छ, उहाँको सार्वभौमिकता मा, काम हुन अनुमति यी दुष्ट शक्तिहरूको.
राक्षस 'काम मात्र हुनत सम्पत्ति र सास्ती यस प्रकारको जस्तो छैन. वास्तवमा भन्ने हो भने, परमेश्वरको आत्माले indwelled विश्वासीहरूलाई छैन नजिकै गर्न सकिन्छ. तिनीहरू अझै पनि हामीलाई आक्रमण काममा. तिनीहरूले पाप गर्न हामीलाई लोभ्याउन. तिनीहरू झूटा शिक्षा फैलाउन. मा 1 तिमोथी 4, पावलले झूटा शिक्षा दुष्ट को सिद्धान्त भनिएको छ.
दुष्ट संसारमा दुष्ट धेरै लागि जिम्मेवार छन्. पक्कै हामी आफ्नो प्रभाव आय जहाँ अझै पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ. र तिनीहरूले जीवित परमेश्वरको शत्रु हो.
येशू गर्न रन (5:6)
फिर्ता मानिसलाई. त्यसैले शैतानिक सेना बन्द लड्न पनि बलिया हुन्छन्. कुनै एक उहाँलाई छुटाउन सकेको छ. उहाँले सकेसम्म मान्छे देखि रूपमा टाढा भएको tombs मा भएको. तर उहाँले दूरी मा येशूले बन्द देख्दा उहाँले उहाँलाई चल्छ र उहाँलाई अघि तल घोप्टो.
यस खण्डमा यहाँ एक सानो मुश्किल हुन्छ प्रेतहरू यो मानिस मार्फत बोल्न किनभने, तर म पाठ हामीलाई उहाँले येशूलाई भाग्यो गर्दा नियन्त्रणमा मानिस थियो भनेर विश्वास गर्न लगाउँछ लाग्छ. येशूलाई देख्नुहुन्छ, र थाह शायद येशूले पीडा यी दुष्ट बारेमा केहि गर्न सक्ने. शायद येशूले दमन उहाँलाई मुक्त गर्न. उहाँले राहत को संभावना देख्नुहुन्छ र मौका मा चल्छ.
हामी यहाँ भूत मानिस केही सिक्न सक्छौं. उहाँले थाहा थिएन कसरी कसैले उहाँलाई छुटाउन सकिएन, तर तरिका उहाँले थाह को उहाँलाई छुटाउन सकिएन. हामीलाई केही brokenness को यो नै बिन्दु आउन आवश्यक, जहाँ सबै हामी के गर्न सक्नुहुन्छ येशूलाई चलेको. हामी हाम्रो इच्छा शक्ति देख रोक्न आवश्यक, हाम्रो पैसा गर्न, हाम्रो मित्र र हामी येशूलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक! येशूले कल, "मलाई सबै थकित र भारी लादेन छन् जसले तपाईंलाई आउनुहोस्, र म आफ्नो आत्मामा लागि आराम दिनेछु। " हामी वितरण छौँ कसरी थाहा छैन, तर हामी चिन्ने यो गर्न सक्नुहुन्छ.
जब मानसिक अस्थिर भएका मान्छे संग काम यो यस्तै छ. तिनीहरूलाई stigmatize छैन, तिनीहरूलाई घृणा, तिनीहरूलाई खिसी र तिनीहरूलाई हाँस्न. हामी उनलाई दया गर्नुपर्छ. केहि भन्दा बढी, तिनीहरूले वितरण गर्न आवश्यक. हामी holistically तिनीहरूलाई सेवा गर्नुपर्छ, आवश्यक छ भने दबाइ प्रयोग, तर छुटकारा येशू तिनीहरूलाई दर्शाउन. र तिनीहरूलाई उहाँलाई भेट्न लागि प्रार्थना. तिनीहरूले प्रभु एक मुठभेड आवश्यक. दबाइ हामीलाई वशमा पार्दै जाओ गर्न सक्नुहुन्छ, र परामर्श हामीलाई थप स्पष्ट विचार मदत गर्न सक्छ, तर येशूले मात्र हामीलाई सारा बनाउन सक्छ.
मलाई यो दृश्य अर्को भागमा आफ्नो ध्यान आकर्षित गरौं.
द्वितीय. प्रेतहरू बोल्नुहोस् (5:7-13)
बित्तिकै येशू अघि घोप्टो उहाँले बाहिर रुन्छिन्, "मलाई के गर्न येशूले के छ, सर्वोच्च परमेश्वर को छोरा? म परमेश्वरले तपाईं adjure, मलाई पीडा छैन!" पाठ किनभने येशूले यसो भन्दै थिए त्यो बाहिर रुन्छिन् भन्छन्, "उहाँलाई तपाईं अशुद्ध आत्मा को बाहिर आऊ।" यो यस कुरा उहाँलाई भित्र अशुद्ध आत्मा छ भनेर हामीलाई देखाउँछ.
अब हामी पहिले देखि नै येशू र दुष्ट नै पक्षमा छैनन् भनेर स्थापित गर्नुभएको. येशूले परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र दुष्ट परमेश्वरको उद्देश्यका विरुद्ध हो. त्यसैले यसलाई दृष्टिकोण मा राख्न प्रयास गरौं.
यो एक युद्ध समयमा जस्तै हुनेछ. र गरेको विदेश केही POWs छ र अमेरिकी सेना तिनीहरूलाई बचत गर्न आउन र जेल गार्ड भन्न भन्न गरौं, "आह अमेरिकी सेना? मानिस तपाईं यहाँ के गर्दै? तपाईं बस हाम्रो कुरा के कृपया गरौं सक्नुहुन्छ? कृपया हामीलाई चोट छैन!"छैन भनेर पागल हुन दिनुहुन्छ? यो जस्तै छ, "यो एक युद्ध छ? तपाईं फैलन सट्टा झगडा गर्नु हुँदैन हुन?"तर यो यो एक सामान्य युद्ध छैन भनेर प्रकट गर्छ. त्यहाँ केही यो युद्धमा बारेमा विभिन्न छ.
त्यसैले हामी येशूको यो मुठभेड प्रेतहरू र येशूले आफ्नो सम्बन्ध बारे प्रकट चार कुराहरू हेर्न जाँदैछन्.
1. तिनीहरूले उहाँ जो थाह
प्रेतहरूले यो तिनीहरूलाई अघि जो खडा छ सोध्न छैन. बित्तिकै उहाँलाई देख्न तिनीहरूले उहाँलाई येशूले हुन पहिचान. तिनीहरूले उहाँ भन्न येशूले, सर्वोच्च परमेश्वर पुत्र. तिनीहरू केवल नाम उहाँलाई कल छैन तर तिनीहरूले उहाँको स्थिति पहिचान.
यो वास्तवमा मत्ती मा पत्रुसको स्वीकार जस्तै धेरै सुनिन्छ 16 येशूले छ कि "ख्रीष्टको, जीवित परमेश्वरको छोरा। " प्रेतहरूले वास्तवमा बस परमेश्वरको सत्य घोषणा. र तिनीहरूले townspeople भन्दा अनन्त कुराहरू मा थप चासो अन्तरदृष्टि छ र मान्छे को चारैतिर. तिनीहरूले थाहा. यद्यपि, तिनीहरूले विद्रोही.
जो मलाई लाग्छ हामीलाई एउटा डरलाग्दो सत्य देखाउँछ. भाइबहिनीहरू, येशूले छ जसले तपाईंलाई थाह पाउन सक्नुहुन्छ, येशूले थाह बिना. तपाईं हरेक सप्ताह शिखर सम्मेलन चर्च आउन सक्छ. तपाईं Seminary मा हुन सक्छ. तपाईं हरेक पोडकास्ट सुन्न र हरेक धर्मशास्त्र पुस्तक पढ्न सक्छ. तर के तपाईं येशू जो भन्न सक्छौं किनभने मान छैन, तपाईंले उहाँलाई थाह.
उहाँलाई थाह भएकोले गहिरो संग के छ, घनिष्ठ सम्बन्ध - अन्तरक्रिया र मायालु र गहिरो स्तरमा भरोसा. उहाँलाई बारेमा थाह भएकोले केही memorizing तथ्य भन्दा बढी छ. तथ्य Memorizing परमेश्वरले हामीलाई के भनिएको छ छ. अनि परमेश्वरले आफ्नो पुस्तक स्मार्ट प्रभावित छैन. तपाईं साँचो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईं को लागि राम्रो; त्यसैले दुष्ट सक्छन्.
जेम्स 2:19 भन्छन्, "तपाईं परमेश्वरको एक छ भन्ने विश्वास गर्छन्; तपाईं राम्रो. पनि दुष्ट विश्वास-र shudder!" यदि परमेश्वरको ज्ञानमा एक बदलिएको जीवन नेतृत्व छैन, तपाईं दुष्ट भन्दा कुनै राम्रो हो. साँचो विश्वास अप देखाउँछ.
2. तिनीहरूले थाहा उहाँले तिनीहरूलाई विरोध हुनेछ
उस्ले भन्यो, तपाईं मलाई के गर्न छ? मूलतः, तपाईं किन यहाँ? एक्लै हामीलाई छोड्न! तिनीहरूले थाह येशूले, सर्वोच्च परमेश्वर पुत्र परमेश्वरको राज्य ल्याउन आएको छ. तिनीहरूले थाहा येशूले सबै दुष्ट संग दूर गर्न र सबै कुरा नयाँ बनाउन आएको छ. तिनीहरूले थाह आफ्नो विनाश समावेश. तिनीहरूले थाहा अन्त मा उनि नष्ट कि हुनेछ र येशू ख्रीष्टको शासन गर्नेछ.
3. तिनीहरूले थाहा उहाँले थप शक्तिशाली तिनीहरूलाई भन्दा छ
तिनीहरूले आफ्नो नाम रोमी पल्टनमा छ भनेर भन्न. यो त्यहाँ तिनीहरूलाई थुप्रै छन् भनेर देखाउन चाहनुभएको छ. रोम मा एक रोमी पल्टनमा थियो पाँच हजार छ सैनिकहरु. साथै, हामी तिनीहरू कसरी बलियो हेर्न. हामी कम्तीमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 5,000 दुष्ट. यद्यपि, तिनीहरूले कृपा लागि निवेदन.
तपाईं अधिक शक्तिशाली आफ्नो शत्रु भन्दा हो भने त्यहाँ डर लागि कुनै कारण वा तपाईं पनि एक मौका छ भने.
के तपाईं कहिल्यै ठूलो खेल कुरा गर्ने र सर्कलमा वरिपरि हिंड्न तर तपाईं कहिल्यै तिनीहरूलाई लडाई हेर्न दोस्तों देखेको छु? तिनीहरूले जीत बिल्कुल कुनै मौका मानिसहरूले सामान्यतया थाहा. यो हामी यहाँ देख्न छ. के हामी देख्न कमजोर छ, पराजित शत्रु कृपा लागि भीख माँग.
4. तिनीहरू उहाँले आफ्नो अधिकार छ भनेर थाह
तिनीहरूले आफ्नो अनुमति माग्नु छ भन्ने महसुस. तपाईं आफ्नो बराबर देखि अनुमति माग्नु छैन. धर्मशास्त्र भर सबै दुष्ट शक्तिहरूको केहि लागि परमेश्वरको अनुमति आवश्यक. अय्यूबको कथा बारेमा सोच्नुहोस्. शैतानलाई अय्यूबको स्पर्श गर्न परमेश्वरको अनुमति चाहिन्छ र मात्र धेरै परमेश्वरको अनुमति रूपमा गर्न अनुमति दिएको छ.
तिनीहरूले कहीं नहीं वा येशूको अनुमति बिना केहि गर्न सक्छन्. तपाईं परमेश्वरले तिनीहरूलाई रोक्न भने होइन हाम्रा संसारमा हुनेछ के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तिनीहरूले आफ्नो बाटो थियो भने जस्तै तिनीहरूले यो मानिस गरे तिनीहरूले हामीलाई सबै पीडा हुनेछ. तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई अनुमति छैन र हामी लागि उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ.
उसलाई लागि सबै कुरा सिर्जना, स्वर्ग र पृथ्वीमा, देखिने र नदेखिने, thrones वा dominions वा शासकहरू वा अधिकारीहरूले -सबै कुरा कि उसलाई मार्फत र उहाँलाई लागि बनाइयो. (कलस्सी 1:16 ESV)
यी दुष्ट मार्फत र येशूको लागि गरियो. तिनीहरू विद्रोही छन्, तर अझै पनि आफूलाई बन्द देखाउन उहाँको महान् योजना pawns रूपमा प्रयोग गरिन्छ.
ख्रीष्टको वचन शक्ति यहाँ प्रदर्शनमा साँच्चै. केवल "शान्ति अघि दृश्य जस्तै, अझै पनि हुन। "हामी परमेश्वरको वचन अख्तियार हेर्न. येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले बोल्छ र आज्ञा जब यो गर्नै पर्छ. उहाँले सोध्नु छैन, उहाँले आज्ञा. येशूको वचन थप शक्तिशाली भारी तोप भन्दा छ. ख्रीष्टको वचन शक्तिशाली छ! यो सँगै ब्रह्माण्डको धारण!
यो अघि कथा उहाँ सृष्टि भन्दा उहाँको Lordship देखाए. उहाँले रोग भन्दा उहाँको Lordship देखाउँछ यस पछि कथा. येशूले सबै प्रभु हुनुहुन्छ. अनि उहाँले दया उद्धार.
भाइबहिनीहरू, हामी येशूको साँच्चै प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भनेर दृढ विश्वास संग विश्वास छ. बाइबल त्यहाँ बिल्कुल छ कि केही छ कि येशू ख्रीष्टको अख्तियार अन्तर्गत छैन अवस्थित सिकाउँछ. कुनै रूख छ, कुनै आवाज, कुनै कीराहरूको, कुनै पशु, कुनै नास्तिक, कुनै मुसलमान, कुनै हिन्दु, कुनै पनि स्वर्गदूतले, कुनै राक्षस, छ कि छैन कमसल र येशू ख्रीष्टको अख्तियार अन्तर्गत कुनै राक्षस. परमेश्वरको एक समय को लागि विद्रोह गर्न अनुमति दिन सक्छ, र उहाँले तिनीहरूलाई अलग एक पल को लागि उहाँको lordship देखि मा जाने अनुमति दिन सक्छ, तर येशूले सबै कुरा नयाँ गर्नेछु र उहाँले आफ्ना खुट्टा अन्तर्गत सबै कुराहरू ल्याउनेछ.
III. येशूले मानिसको उद्धार (5:14-20)
आफ्नो शक्तिशाली शब्द येशूको मानिस बुझाइएको छ. उहाँले दुष्ट फ्याँकिएको छ.
मानिसहरूलाई उहाँले त्यहाँ ढाकिएको बसिरहेका र आफ्नो दाहिने मनमा थियो उसलाई देख्दा. एक क्षण मा सबै परिवर्तन. तिनीहरूले उहाँलाई देखे अन्तिम समय उहाँले bruising थियो र निरन्तर चिल्ला. अब उहाँले तपाईं र मलाई रूपमा सामान्य रूपमा थियो.
उहाँको कृपा गरेर येशूको यो मानिस पुनःस्थापित. येशूले त पाप र मृत्यु द्वारा marred छ उहाँको सृष्टि पुनर्स्थापना संसारमा आएको छ. उहाँले पितालाई सबै कुरा मिलाप छ.
र उहाँले यस मानिसले कृपा देखाउँछ र उहाँलाई उद्धार. यो मानिस, हुनत उहाँले थिचोमिचो थियो, तपाईं र म जस्तै एक पापी थियो. उहाँले वितरण गर्न योग्य छैन.
तर येशूले योग्य के आधारमा छुटकारा छैन. उहाँले कृपा मा कार्य अघि तपाईं यसलाई कमाउन लागि उहाँले प्रतीक्षा गर्दैन. येशूले दयालु छ किनभने येशूले दयालु छ. उहाँले मायालु र उहाँको सृष्टि ख्याल राख्नुहुन्छ छ.
कुनै आध्यात्मिक अस्तित्व त बलियो छ, कुनै पाप त बलियो, येशूको शक्ति र अख्तियार surpasses भनेर केही. सृष्टिको सबै किनभने उहाँलाई विषय हो. अनि जब उहाँले गर्दछ, उहाँले आफ्नै कृपा बाहिर गर्छ, दया, र अनुग्रह.
येशूले बिल्कुल केहि हामीलाई डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ: बिना, लत, निराशा, दुखाइ, दुरुपयोग, खराब विवाह, यो हुन सक्छ जे. येशूले आफ्नो चिकित्सा र आफ्नो उद्धारक छ. यो निराशजनक लाग्न सक्छ, तर हामी यहाँ ख्रीष्टको प्रदान शक्ति हेर्न.
चतुर्थ. मानिसहरू प्रतिक्रिया (5:17-20)
छैन केवल demoniac येशूले एउटा मुठभेड थियो, तर सारा शहर छ. तिनीहरूलाई थुप्रै सारा घटना साक्षी, र अरूलाई यसको बारेमा सुने. सबैलाई येशूले आफ्नो मुठभेड कस्तो प्रतिक्रिया गर्दैन?
यो townspeople डराएका थिए! तिनीहरूले यस्तो शक्ति र अधिकार कहिल्यै देखेका थिए. शायद तिनीहरूले क्रोधित आफ्नो सुँगुरहरु बन्द cliff भाग्यो भनेर हुनुहुन्छ. तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ कसरी थाहा थिएन! तिनीहरूले उहाँलाई छोड्न वास्तवमा माग्छु!
आज धेरै मानिसहरू येशूको रुचि छैन. उहाँले जीवनको आफ्नो सामान्य ढाँचा disturbs. येशूले मानिसहरूलाई असहज बनाउन tends. बक्स मा सानो comfy येशूले अवस्थित छैन. तपाईंले उहाँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खोजी राख्न छौँ. उहाँले कुराहरू माथि जनाए. उहाँले अन्धकारमा demolishes र ज्योति हामीलाई भनिएको छ.
पहिलेका demoniac कृतज्ञता संग जवाफ. येशूलाई पछ्याउन चाहन्छ र उसलाई हुन बिन्ती. येशूले रहन र अरूलाई बताउने उसलाई भन्छ. उहाँलाई obeys. यो येशूको एउटा मुठभेड गर्ने अधिकार प्रतिक्रिया छ.
अरूको भन्नुभयो अन्तिम समय के प्रभु तपाईं लागि गर्नुभएको छ जब थियो? के उहाँले तपाईंलाई बुझाइएको गर्नुपर्छ? शैतानिक सम्पत्ति जस्तै नाटकीय हुन छैन, तर यो राम्रो. एक विशेष पाप संघर्ष छुटकारा हुन सकेन. प्रलोभनको विजयी हुन सकेन. रोग बाट निको हुन सकेन. उहाँले तपाईंलाई सुरक्षित कसरी गर्ने वा अरूलाई बताउन. अरूलाई बताउने!
हामी शक्ति साक्षी लागि यो सम्भव छ भनेर यहाँ हेर्न, अनुग्रह, र येशूको अख्तियार र अझै पनि एक चेला हुन गर्न. केही भ्रम संग प्रतिक्रिया, वैमनस्यता अरूलाई, बस मात्र ताली केही. यी कुनै पनि परमेश्वरको लागि भनिएको प्रतिक्रिया हो.
उहाँले शासक तथा अधिकारीहरूले निरस्त्रीकृत र तिनीहरूलाई लाज खोल्न राख्न, उहाँलाई तिनीहरूलाई भन्दा triumphing द्वारा. (कलस्सी 2:13-15 ESV)
येशूले पृथ्वीमा उहाँको समयमा शत्रु विरुद्ध धेरै लडाई जितेको भए तापनि, दुष्ट को आफ्नो परम हार मार्क सुसमाचारले अन्तमा हुन्छ. उहाँले क्रूसमा मा युद्ध clenched. उहाँले एक पल को लागि पराजित भएको थियो भने यो देखा. तर उहाँले सबै शक्ति वृद्धि हुनेछ.
क्रूसमा येशूले यी शैतानिक सेना राख्न, वा शासकहरू र अधिकारीहरूले पावलले तिनीहरूलाई कलस्सी मा भनिएको रूपमा, लाज खोल्न. उहाँले तिनीहरूलाई लज्जित. उहाँले तिनीहरू कसरी कमजोर सबैलाई देखाए. उहाँले आफ्नो प्रभाव मिट. उहाँले अन्तिम झटका सम्हाल्न- अग्रिम.
अब आफ्नो विद्रोह सबै व्यर्थ छ. लगभग रिपब्लिकन प्राइमरी जस्तै. त्यहाँ अन्य मान्छे जीत सके कुनै बाटो थियो, तर तिनीहरू धोका साथ धक्का राखिएको. यी दुष्ट परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्न जारी, उनि स्पष्ट पहिले नै पराजित गरिएको छ. उहाँले पुरानो को प्रतिज्ञा काम थाले. अनि उहाँले फिर्ता गर्दा उहाँले अन्तमा आफ्ना शत्रुहरूलाई पराजित हुनेछ.
केवल पश्चात्ताप र विश्वास क्रूसमा उहाँको काम सुनिरहेका हामी अख्तियार लाभ उठाउन प्राप्त गर्छन्, शक्ति, र येशूको विजय. उहाँले सबै को प्रभु छ. तपाईंको आफ्नै हृदय जाँच्न र तपाईं यस प्रभु प्रतिक्रिया कसरी हेर्न.
यो म पालन गर्न चाहनुहुन्छ कि प्रभुको प्रकारको छ. एक छ जो एक छुटकारा, एक राजा, एक प्रभु, शासक, र एक दयालु उद्धारकर्ता. सुसमाचार प्रतिक्रिया माग.
यो साताको अनत्यमा, दुष्ट हाम्रो मन को Forefront हुन हुन्छ. दुष्ट को एक भयानक कार्य कोलोराडो मा भयो. हामी सन्ताप गर्नुपर्छ. हामी क्रोधित हुनुपर्छ. तर हामी परमेश्वरको अन्त मा विजय हुनेछ वा छैन आश्चर्य हुँदैन. अन्तिम झटका प्रहार गरिएको छ.
येशू क्रूसमा मा दुष्ट भन्दा triumphed छ. उहाँलाई चलान. उहाँलाई झुक्नुपर्छ. उहाँलाई विश्वास. उहाँलाई पछ्याउन. उहाँको प्रशंसा. अरूलाई बताउने.
के.जि • अगस्ट 20, 2013 मा 5:01 छु • जवाफ
तपाईं यात्रा के को लागि धन्यवाद!!! म “प्रेम” नयाँ brag लोगो. तपाईंले केही परिधान वा उत्पादनहरु मा राख्न सकिएन. त्यस संग एक टी-शर्ट प्राप्त गर्न प्रेम. :)
उल्लेख: मेरो लेख पढ्नुहोस् (8-19-2013) | मेरो दैनिक Musing